Mijaly ny Vavolombelon’i Jehovah Noho ny Didy Navoakan’ny Fitsarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Chichewa Chitumbuka Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Xhosa Yorobà
Tranona Vavolombelon’i Jehovah any Lutsino, Moscou, nodoran’ny olona
Mijaly ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia Noho Ilay Didim-pitsarana Navoakan’ny Fitsarana Tampony
Lasa mijaly be ny Vavolombelon’i Jehovah rehetra manerana an’i Rosia, noho ilay didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana Tampony tamin’ny 20 Aprily 2017. Manitsakitsaka ny zon’ny Vavolombelona ny manam-pahefana, ary milaza fa tsy ara-dalàna ny fivavahan’izy ireo. Lasa mieritreritra àry ny olona sasany any Rosia hoe mahazo manao tsinontsinona ny Vavolombelon’i Jehovah izy ireo, ary afaka mihetraketraka aminy mihitsy aza.
Inona no porofo fa manao ny tsy rariny sy manitsakitsaka ny zon’olombelona ny fanjakana rosianina?
Ampangainy ho manao heloka bevava ny Vavolombelon’i Jehovah
25 Mey: Nanao bemidina tao amin’ny trano iray nivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Oryol ny polisy. Nosamborin’izy ireo i Dennis Christensen, teratany danoà sady anti-panahy ao amin’ilay fiangonana. Nampidirina am-ponja vonjimaika Atoa Christensen mandra-pahatongan’ny 23 Jolay, satria mbola te hitady porofo ny mpampanoa lalàna hoe “mahery fihetsika” izy. Mety higadra enin-taona na folo taona Atoa Christensen raha hita hoe meloka.
Namoahany fampitandremana ireo fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah
4 Mey: Nandefa taratasy fampitandremana tany amin’ny solontenan’ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Krymsk ny biraon’ny mpampanoa lalàna. Voalaza ao fa azo ampangaina ho tsy manara-dalàna sy mpanao heloka bevava ilay solontena sy ny olona ao amin’ilay fiangonana, raha mbola tratra manao fotoam-pivavahana.
Dimy, fara fahakeliny, ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah nahazo fampitandremana hoatran’izany, taorian’ilay didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana Tampony.
Manao bemidina any amin’ny toerana ivorian’ny Vavolombelona ny polisy
22 Aprily: Nidiran’ny polisy an-keriny ny trano nivorian’ny Vavolombelona tany Dzhankoy, any amin’ny Repoblikan’i Crimée, rehefa hifarana ny fotoam-pivavahana nataon’izy ireo tao. Nanizingizina ireo polisy fa tsy mahazo miara-mivory intsony ny Vavolombelona taorian’ilay didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana Tampony. Nataon’izy ireo savahao ilay trano ary nakatony, amin’izay tsy azo ivoriana intsony.
Ankoatra an’io, dia efa indimy, fara fahakeliny, ny polisy no niditra an-keriny tao amin’ny fivoriana nataon’ny Vavolombelona. Tany an-tranon’olon-tsotra no natao ny iray tamin’ireo fivoriana ireo.
“Malahelo be aho satria lazaina fa mpanao heloka bevava ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia nefa izy ireo olona tia fihavanana. Tokony mba hanaja ny zon’ny Vavolombelon’i Jehovah ny fanjakana rosianina, anisan’izany ny zon’izy ireo hanaraka ny fivavahany na ny zavatra inoany, ny zony haneho hevitra, ary ny zony hiaraka hivory. Efa nanaiky mantsy i Rosia hoe hanaja ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona sy ny fifanekena nataony tamin’ny OSCE [Fikambanana Misahana ny Filaminana sy ny Fiaraha-miasa Eoropeanina].”—Michael Georg Link, Talen’ny Birao Momba ny Demokrasia sy ny Zon’olombelona ao amin’ny OSCE.
Ampijalina hatramin’ny ankizy
24 Aprily: Nalain’ny mpampianatra baraka ny ankizy roa, tany Bezvodnoye, any Kirov, satria Vavolombelon’i Jehovah ny renin’izy ireo. Nilaza ilay mpampianatra hoe nety ny nataony satria voarara ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia.
17 Mey: Nandefa taratasy fampitandremana tany amin’ny ray aman-drenin’ny mpianatra iray valo taona ny talen’ny sekoly iray any Moscou. Nitory momba an’Andriamanitra tamin’ny mpiara-mianatra aminy mantsy ilay ankizy. Noresahina tao amin’ilay taratasy ilay didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana Tampony, ary voalaza tao hoe voarara ny “manao an’izay zava-drehetra tsy mifandray amin’ny fianarana”, rehefa any an-tsekoly. Norahonan’ilay tale ny ray aman-drenin’ilay zaza hoe hiresaka amin’ny polisy izy sady “hangataka hoe halefa mianatra any an-toeran-kafa” ilay zaza.
Tsy avela hanao fanompoana sivily ny Vavolombelon’i Jehovah
28 Aprily: Nisy Vavolombelona nangataka tsy hanao miaramila fa hanao fanompoana sivily, izany hoe hanao asa hafa tsy misy ifandraisany amin’ny miaramila. Tsy nanaiky ny fangatahany anefa ny Sampan-draharaha Miandraikitra ny Fiantsoana Hanao Miaramila, any Cheboksary sy Marposadskiy. “Mahery fihetsika” mantsy, hono, ny Vavolombelona ka tsy azo avela manao fanompoana sivily.
Nisy Vavolombelona roa hafa koa, fara fahakeliny, nanao fangatahana toy izany nefa nolavina.
Tsy mitombina ilay fanapahan-kevitry ny fanjakana, araka ny tenin’i Philip Brumley, mpanolo-tsaina momba ny lalàna, izay misolo tena ny Vavolombelon’i Jehovah. Hoy izy: “Tsy avelan’ny fanjakana hanao fanompoana sivily ny tanora Vavolombelona satria, hono, mahery fihetsika, nefa sady tereny hanao miaramila ihany. Tsy mitombina mihitsy hoe olona ‘mahery fihetsika’ dia mbola asaina manao miaramila!”
Manao ny tsy rariny sy manavakavaka azy ireo ny mpiara-monina
Iharan’ny herisetra ny Vavolombelon’i Jehovah
30 Aprily: Nisy nandoro ny tranon’ny fianakaviana iray Vavolombelona any Lutsino, any Moscou, ka rava tanteraka. May hatramin’ny tranon’ny ray aman-drenin’izy ireo efa be taona. Noharatsin’ilay olona ny fivavahan’ilay fianakaviana, dia nodorany avy eo ilay trano.
24 Mey: Nodoran’ny olona koa ny trano iray fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah any Zheshart, any amin’ny Repoblikan’i Komi, ka simba be.
Efitrano fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah, any Zheshart, nodoran’ny olona
Trano fivoriana sivy hafa koa, fara fahakeliny, no nisy nanimba taorian’ilay didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana Tampony tamin’ny 20 Aprily 2017.
26 Aprily: Vao nivoaka ny tranony ny Vavolombelon’i Jehovah iray, tany Belgorod, dia nisy olona nivazavaza taminy hoe efa voarara ny Vavolombelona, ary avy eo nidaroka azy.
11 Mey: Nisy lehilahy maromaro niditra an-keriny tao amin’ny trano iray nivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah tany Tyumen. Nompan-dry zareo ny olona nivory tao sady norahonany.
Roahina amin’ny asany ny Vavolombelon’i Jehovah
15 Mey: Noroahin’ny mpampiasa azy ny Vavolombelon’i Jehovah rehetra tao amin’ny orinasa iray, any Dorogobuzh, any Smolensk. Nilaza ilay orinasa fa nahazo baiko avy any amin’ny Sampan-draharahan’ny Fiarovam-pirenena (FSB) ry zareo hoe tokony horoahina ny Vavolombelona. Mahery fihetsika mantsy, hono, ny Vavolombelona ka tsy mahazo miasa ao.
Taorian’ilay didim-pitsarana navoakan’ny Fitsarana Tampony koa, dia intelo, fara fahakeliny, no nisy Vavolombelona norahonan’ny mpampiasa azy hoe horoahina, satria, hono, mahery fihetsika ny fivavahany. Noteren’ny polisy hilaza izay zavatra fantany momba ny Vavolombelona hafa ny vehivavy iray, any Yashkino, any Kemerovo, nefa tsy nanaiky izy. Nilaza ireo polisy hoe tsy manara-dalàna izy satria voarara ny fivavahany. Nampitovin-dry zareo tamin’ny Silamo mahery fihetsika koa ny Vavolombelon’i Jehovah.
Inona no hitranga amin’ny Vavolombelon’i Jehovah raha mitohy izao?
Efa folo taona izao no nohitsakitsahina ny zon’ny Vavolombelon’i Jehovah any Rosia, ary ny fanjakana rosianina no ao ambadik’izany. Enjehina mafy ny Vavolombelona any, ary tsy hay hoe inona no mbola hanjo azy ireo vokatr’ilay didim-pitsarana. Lasa ratsy laza koa ny Vavolombelona, ary vao mainka sahy mampijaly azy ireo ny olona sasany sy ny manam-pahefana, araka ny hitantsika teo. Tena matahotra ny Vavolombelon’i Jehovah maneran-tany hoe inona no hanjo an’ireo mpiray finoana aminy any Rosia. Tsy hain’izy ireo mantsy hoe hanamafy an’ilay didim-pitsarana nivoaka sa hanafoana azy io ilay Filan-kevitra ao amin’ny Fitsarana Tampony, rehefa handinika an’ilay raharaha amin’ny 17 Jolay 2017.
Hoy Atoa Brumley: “Tsy nisy nahavita nanome porofo mihitsy hoe mahery fihetsika ny Vavolombelon’i Jehovah. Tafahoatra loatra izao fanenjehana mihatra amin-dry zareo izao satria mbola vao ampangaina fotsiny ry zareo hoe mampidi-doza, nefa efa ampijalina be sahady. Tokony handinika indray i Rosia hoe mety ve ny zavatra ataony amin’ny Vavolombelon’i Jehovah rehefa jerena ny lalàm-panorenany sy ny fifanarahana iraisam-pirenena nosoniaviny, izay mamela ny olona hanaraka ny fivavahana tiany.”